Lalàna · Oktobra, 2009 · Global Voices teny Malagasy
Lalàna · Oktobra, 2009
Tantara mikasika ny Lalàna tamin'ny Oktobra, 2009
Arzantina: Lany ny lalàna vaovao hifehy ny Media
Amerika Latina20 Oktobra 2009
Nolanian'ny Loholona Arzantina ny lalàana vaovao hifehy ny media mampiasa haino aman-jery, izay ahitàna fepetra vaovao maromaro momba ny Onjam-peo, ny cable, ny fampielezam-peo sy fahitalavitra avy amin'ny satelita.
Rosia: Filazana ny fihaonambe ho fahatsiarovana an'i Anna Politkovskaya
Rosia14 Oktobra 2009
Nisy namono tamin'ny 7 Okt.2006 i Anna Politkovskay. Amin'ny Alarobia, hivondrona ireo olona any Moscou mba ho fahatsiaroana azy sy ireo mpanao gazety sy mafana fo hafa maty. Na izany aza, tsy dia faly loatra ireo mpitoraka blaogy sasany eo am-piresahana momba izany hetsika ho avy izany.
Costa Rica: Filoha teo aloha migadra 5 taona noho ny kolikoly
Amerika Latina06 Oktobra 2009
Kostarikana mihoatra ny 14000 tsy afa-nijery fahitalavitra androany [alatsinainy] no afaka nanaraka mivantana ny fitsarana ny filohany teo aloha Rafael Ángel Calderón nanomboka tamin'ny telo ora tolakandro tamin'ny alalan'ny vohikala telo farafahakeliny no niara-nanapa-kevitra hitantara azy an-tserasera [streaming] , zavabita tsara indrindra [record] izany ho an'ny tambajotran-tserasera Kostarikana. Tsy vitan'ny...